isethi Corporate of esobala films zokuzivikela for the screen kanye nezezindlu BodyGuardz UltraTough Sula Okugcwele Body (2 amasethi) for BlackBerry 9790 Bold — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
isethi Corporate of esobala films zokuzivikela for the screen kanye nezezindlu BodyGuardz UltraTough Sula Okugcwele Body (2 amasethi) for BlackBerry 9790 Bold
Zempi for BlackBerry yakho! UltraTough — kusho ultraprochnaya, ukumelana layo lokukwazi various amathonya lezimanga! A eziklanywe kahle futhi acace kahle kakhulu, wena ngeke awubone ukungakhululeki emsebenzini kanye nomklamo esiphelele smartphone yakho ozithandayo kuyoba uyabukeka emehlweni njengoba kuqala.
Zempi for BlackBerry yakho! UltraTough — kusho ultraprochnaya, ukumelana layo lokukwazi various amathonya lezimanga! Keys, yiziphi izinto eziqinile futhi ngisho nezinzipho abanamandla phambi kwakhe, ingasaphathwa soiling elula futhi amabala. Ngokuphawulekayo, ifilimu ohlakaniphile owaklama futhi omsulwa, ngeke awubone ukungakhululeki emsebenzini kanye nomklamo esiphelele smartphone yakho ozithandayo kuyoba uyabukeka emehlweni njengakuqala!
I kit kuhlanganisa iqoqo egcwele films for zonke izingxenye fixed of the smartphone, nse njengoba isimo sabo. It has cutouts for zonke izimbobo. Banamathela ngokuphelele kufanelana ngaphansi amalebula nokuxebuka off akabashiyi izibazi. Ibhayisikobho enenhlabathi bahlanza kalula ngendwangu. Long kungenxa izinga okusezingeni eliphezulu ngokwedlulele, impahla ngokuqinile.
Ukuthenga leli phasela, uthola ezimbili nje amasethi ephelele films omuhle. Iphakethe iqukethe gel ekhethekile futhi usentekenteke indwangu yokuhlanza.
isethi Corporate of esobala films zokuzivikela for the screen kanye nezezindlu BodyGuardz UltraTough Sula Okugcwele Body (2 amasethi) for BlackBerry 9790 Bold, esobala BZ-BBB9-1111 ●